मिथिला–मधेसमा बुद्धधर्म किन फलिफाफ भएन
क्रमश : तात्कालिन शासनशैली पनि बाधकबुद्धमहानिर्वाणको प्रथम शताब्दिपछि बज्जीपुत्तका भिक्षु एवं तात्कालिक बैशालीका नागरिकहरु बौद्धधर्म विपरित क्रियाकलाप गर्न थाले । भिक्षुनी संघ व्यभिचारीहरुको अड्डा बनिसके । संघमा नारीको प्रवेशको सहमति दिदा बुद्ध स्वयं पछि पश्चातापगरें । बौद्धधर्म प्रसारका सार्वाधिक प्रभाव कालमा बौद्धभिक्षु नागरिकसंग मीलेर विपरित आचरण गर्न थाले त्यसले बौद्धधर्मलाई बदनाम गराउने षडयन्त्र सफल भयो । मिथिला बज्जी संघको सदस्य भएपछि बौद्धधर्मको प्रभावमा मिथिला पर्न सक्छ । यस भयले आजात शत्रुका पुत्र उदयन शैव, शाक्त तथा बैष्णवधर्ममा विभक्त तात्कालिक मैथिली समाजलाई सम्माहित गराउन स्मार्त सम्प्रदायको निर्माण र विकास गरें । स्मार्त सम्प्रदाय भन्नाले ।।।एक्कैसंग शिव, शक्ति र बिष्णुको उपासना गर्ने र पुजने परम्परा हो ।’ यसै स्मार्त पन्थको प्रतिक आजपनि परम्परावादी मैथिल निधारमा शैवधर्मको प्रतिक विभूत÷भष्म लगाउंछन् । शाक्त धर्मका आस्थाको प्रतिक रक्तचन्न वा कलेजो रङ्गक रोड़ी–पीपा–सिन्दुरको तिलक गर्छन् । बैष्णवधर्मको आस्थाका प्रतिक रामरस,पीयौड़ी (माटोले बनाइएको एकप्रकारको चन्दन) लगाउं छन् । मौर्य सम्राट बिम्बसार बिस्तारवादी थिए । बिम्बसारका पुत्र अजात शत्रु पनि विस्तारवादी एवं महत्वाकांक्षी थिए । बज्जिसंघलाई धरासायी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने षडयन्त्र अजात शत्रुले रचि सकेका थिए । मगधसम्राट अजात शत्रु अधिन मिथिला आएपछि । राज्यशासन विस्तारमा ब्राह्मणीय आडम्बरी संस्कृतिलाई पुनःजागृति हुने अवसर भेटायो । बैशाली नागरिक लिच्छविहरुको पूmट डालेर आप््mनो कुशलाता देखाउन थाले । अनुकूल वातारण तयार भएपछि अजात शत्रु बैशालीमाथि आक्रमण थाले । सोरह वर्षसम्म संघर्ष चलेको चल्दै रह्यो । ईशापूर्व ५६२–५४५सम्म चलेको संघर्षमा अन्ततः बज्जिसंघ पराजित भयो । बज्जिसंघको पतनपछि अनेक तरहले राजनीतिक उथल–पुथल भएको ईतिहास छ । मिथिला बैशाली गणराज्यबाट कटेर मगध साम्राज्यका अङ्ग बन्न गएको थियो । राजनीतिका त्यहीं कहालीलाग्दो समयको कालखण्डमा गौतमबुद्ध पृथवीमा पाइला टेकेका थिए । बुद्धको समयमा बैशाली (वर्तमान भारत बिहार राज्यका राजधानी पटना नजिक कायम बैशाली जिल्ला) एउटा घना बस्ती थियो । त्यस अन्तर्गत तीनवटा मण्डला थिए । पहिलो मण्डला अन्तर्गत ७ हजार, दोस्रो अन्तर्गत १४ हजार तथा तेस्रो मण्डला अन्तर्गत २१ हजार घर–वास थिए । बुद्धकालका प्रचलित गणराज्य वर्तमान भारतको गोरखपुर, दरभंगा, मधुबनी र गङ्गानदीको मध्यवर्तीयक्षेत्र(हालको मिथिला–क्षेत्र)एवं नेपालको हिमालीक्षेत्रसम्म फैलिएको बिभिन्न गणराज्य कायम थियो । विभिन्न गणराज्यहरुमा मगध, कोलिय, शाक्य, लिच्छवि, विदेह आदि प्रसिद्ध गणराज्य थिए । त्यती बेला मिथिला भन्ने थिएन । विदेह थियो विदेहलाई नै कलान्तरमा आएर मिथिला भन्न थालिएको हो । गौतम बुद्धलाई महामानव बनाउने अथवा देउता बनाउने जो साँस्कृतिक विरासत छ हामिलाई प्राप्तछ त्यो हाम्रो मुलुकको गौरवपूर्ण सम्पत्ति हो । यस अतुलनीय सम्पत्तिमाथि मिथिला–मधेसलेपनि गर्व गर्नुपर्छ ।वैदिककालको प्रचलित धर्म र धार्मिक विश्वासमाथि बुद्धले ठूलो घात गरेकोछ । यो कुरो ब्राह्मणहरुले प्रचारित गर्ने कार्यमा तल्लिन भए । उनिहरुको बुझाई थियो बुद्धधर्मको प्रसारले आप्mनो रोजी–रोटीको साधन बन्द भएको छ । समान्य जनता अधिकांश बुद्धका अनुयायी थिए । बज्जि महासंघमा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुँदा महामानव गौतम बुद्धसंग परामर्श गरिन्थियो त्यो कुरोपनि स्वीकार्य भइरहेका थिएन । अनि भित्रै भित्र षडयन्त्रको जालो बुन्ने काम भइसकेको थियो । आपूmलाई अपमानित अनुभूति गरिरहेका ब्राह्मणहरु र अन्य बीच तारतम्य मीलि रहेका थिएन । सोही अवधिबीच बज्जि महासंघमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो तथा अजात शत्रुले आक्रमण थाले । बस ! ब्राह्मणहरुको सुन्दर दिन फर्कियो । बौद्ध र सनातन धर्मबीचको भिन्नताबौद्धधर्मको मूलसार भनेको बौद्ध निर्वाण सिखाउंद छन् । सनातन (हिन्दु) धर्म मोक्ष प्राप्तिको सहज मार्ग बताउं छन् । भनाइको तातपर्य हो बौद्धधर्म अनिश्वरवादी धर्म छ । यसले मानवको मानवीय पक्षलाई माथि उठाउने पक्षमा विश्वास राख्छन् । ईश्वरको कमिको अनुभूति हुन दिदैन् । सनातनधर्म अन्तर्गत हिन्दुधर्म यसको विपरित दिशा तर्फ लग्छन् ! ईश्वरको आवश्यकता हरेकजीवलाई हुन्छ यो बोध गराउंदै ईश्वरीय शक्तिको प्राप्ती बिना सही रुपमा मोक्ष प्राप्ती हुन सक्दैन भनि बोध गराउंछन् र मानवलाई जीवनभरि त्यसैमा अल्झाएर रहन बाध्य बनाई दिन्छन् जो मानवको अनेक दुःखका कारण बनैत जान्छ । बुद्धधर्ममा यस्तो ।।।ओझराहट’ अल्झाई बझाई गरी राख्ने नीति सिद्धान्त छैन् । बुभ्mनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा यो पनि एक हो ।निर्वाण तथा मोक्ष दुबै दुई विषय हुन् । निर्वाण परिर्वतनका सूचक हो भने मोक्ष अन्त ! परिवर्तन देशकाल समय परिस्थितिलाई बुभ्mदै, आभाष गर्दै जीवनपथमा चल्नकालागि प्रेरित गर्छन् । मोक्ष यथास्थितिमा रहेर संसारिक सबैथोक त्यागेर जानलाई मनोवैज्ञानिकरुपमा तयार गर्छन् । बुद्धका नीति सिद्धान्त(धर्म) र अन्यधर्ममा भिन्नता भनेको यही हो । बुद्धलले भनेका हुन–।।। म न प्रथम छु न अन्तिम, मभन्दा अघिपनि धेरै बुद्ध भए र मेरो पछाडि पनि धेरै बुद्ध हुने छन् । ’ बुद्धका यी महावाणि भन्नुको पछाडिका कारण हो हरेक स्वयंलाई पहिला जान,पहिचान र मान ! यसो गरेपछि बुद्ध कतै खोज्नु पर्दैन । तीमि स्वयं नै बुद्ध छौं, हुन्छौं । सन्देश दिएका हुन ! मानवले आफै आफूलाई जानेपछि । जीवनको बाटोमा हिन्दै जांदा मानिस कतै अल्झिदैन् । हिड्न खोजेका हरेक असहज बाटो सहज भएरजान्छ । मोक्ष पनि सहजतापूर्वक प्राप्त हुन्छ । मोक्ष प्राप्तिका लागि सीताराम–सीताराम, राधे–कृष्ण राधेकृष्णको नाम जाप गर्नु पर्दैन । हरेशिव–हरेशिव रट्नु पनि पर्दैन । बुद्धको मार्गमा हिड्नेहरुलाई ।।। मप्रति आदर भाव मन छ, त्यसकारण मलाई मान त्यो कुरो नहोस् । मैले हिडेको बाटोमा तिमीपनि हिडेर जाउँ र अनुभव गर । अनुभवको कसौटीमा मेरो कथो उपकथर्न शिद्ध हुन्छ त्यसपछि मान्ने मन भए मात्र मान ’ ! बुद्ध आप्mना अनुयायीहरुलाइ सन्देश दिदैं भनेका हुन् । त्यहीं हिन्दुधर्मको प्रसिद्ध ग्रन्थ गीतामा ।।।सबै थोक गर्ने ईश्वर हुन् । मानव मात्र निमित्त छ अरु केही होइन ’ भनेका छन् ! यस्तो विपरितार्थ कुरा किन छ ? त्यसको मूलकारण हो । गीता दास बनाउने साधन हो । बुद्ध वचन कर्म गर्दै जाउ अनुभव हुन्छ र अनुभव भए मुक्तिको सही मार्ग देखिन्छ, उत्तम बाटो भेटाउंछ । ।।।।।।अप्पो दीपो भवः’’ अर्थात् ।।।आप्mनो प्रकाश आफै बन्नु’ । मानव त्यतीको सामथ्र्यवान प्राणि हुन जो आपूm मात्रे प्रकाशित हुंदैन आप्mनो प्रकाश–ज्ञानले संसारलाई आलोकित गर्न सक्छ । यस्ता मानवतावादी सिद्धान्त प्रवाहक बुद्धका नीति सिद्धान्तसंग मिथिला–मधेसका मानिस किन ।।।अछोप’(बञ्चित) रहन गएको हो । अथवा राखि दिएको हो । त्यसलाई खोत्लन जरुरी छ । मिथिला–मधेसको इतिहासमा जे जति नै लेखिएका छन् त्यसमा बुद्धलाई मानक बनाउनु पर्थियो । तर त्यसको चर्चा खासै गरेको पाइदैन यस्तो बइमानी गरिएको हो । अब त्योपनि सुधार्न तिर जानुपर्छ । हुन त’ मैथिली साहित्यको चर्चा गर्दै डा.बाससुदेवलाल दास ।।।मिथिलाको समाज र संस्कृति’ नामक पुस्तकमा ।।। विद्यापतिकालको साहित्य अन्तर्गत प्राकृत–व्यवस्था आहोर प्राकृत–पैंगलम् उल्लेखनीय रहेको भनि समान्य चर्चा गर्नु भएको हो । जो बुद्धसंग सम्बद्ध छन् । बौद्धधर्मलाई बिस्थापित गर्ने षडयन्त्रका कारक तत्व प्रतापि मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त आप्mनो मन्त्री कौटिल्य(चाणक्य)संग दुःखित भएर जैनधर्ममा दिक्षित भएका थिए । चन्द्रगुप्तका नाति अशोक सम्राट ।।।अश्वमेध यज्ञ’ आयोजन नगरीकन आप्mनो साम्राराज्य बिस्तार सम्पूर्ण भारतमा गरेका थिए । जो कुरा ब्राह्मणहूलाई अपच्चय भयो । र सम्राट अशोकलाई उनिहरुले चण्डालको उपाधि दिएर प्रचारित समेत गर्न थाले । सो समयमा कुनै कार्य विस्तार गर्दा सामथ्र्यवानहरुलाई यज्ञ गर्नुपर्ने अनिवार्यता ब्राह्मणहरुले गरेका थिए । सम्राट अशोकले त्यो अनिवार्यतालाई चुनौती दिदै भंग गरेकाले अशोकलाई बदनाम गर्न ब्राह्मणी पडयन्त्र भएको थियो । सम्राट अशोक बुद्धका नीति र सिद्धान्तसंग परिचित हुन थालेका थिए । त्यसैले आडम्बरी ब्राह्मणी धर्म–पंथलाई आवश्यक ठानेन । कालिंग युद्धमा विजयी प्राप्ती पछि सम्राट अशोक बौद्धधर्म ग्रहण गरें । अशोकका पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रासंग भिक्षु बनेर श्रीलंकामा बौद्धधर्मको प्रचार गरें । यस प्रकारले सम्राट अशोक मात्र राज्य विस्तार नगरेर बौद्धधर्मका धर्मसेतु तराई–मधेस मिथिलादेखि हिमालयसम्म विस्तार गरेका थिए । चन्द्रगुप्त पछि विन्दुसार राजा भएका थिए । विन्दुसारका पुत्र अशोक विश्व इतिहासमा अत्यन्त प्रतापि सम्राटको रुपमा आप्mनो पहिचान स्थापित गर्न सफल भए । अशोक तेजस्वी सम्राटका रुपमा आप्mनो पहिचान स्थापित गरेंका थिए । कालिंग युद्धमा विजयी प्राप्त गरेपछि सम्राट अशोक पुरै उत्तरी भारतलाई मगध साम्राज्य अन्तर्गत सामेल गराए । सो अन्र्तगत नेपालका तराई–मधेशपनि सम्माहित भएका थिए । त्यसकालमा वर्ण व्यवस्थालेपनि थेरै प्रश्रय पायो र काम पनि गर्यो । मूलवासी र आयातित आर्यहरुबीचको पनि निकैद्वन्द थियो । बर्ण व्यवस्थामा ब्राह्मण राजा हुंदैन थिए । तर त्यस व्यवस्थालाई भंग गर्ने काम युक्तिपूर्वक भयो । पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण आपनी बहिनलाई प्रयोग गरेर मौर्य सम्राज्यमा घुसपैठ गरें । मौर्यसम्राज्यका सेना रहंदा सेनापति पदमा बहाल हुनमा सफल्ता पाए । पुष्यमित्र शुंग सेनापति भएपछि उनले सेनाको अन्य महत्वपूर्ण पदहरुमा आप्mना विश्वास पात्रहरुलाई नियुक्त गरें । षडयन्त्रका सबै जालो बुनेर तयार भइसकेपछि अल्पव्यस्क सम्राट बृहद्रथलाई हत्या गरियो तथा पुष्यमित्र स्वयं राजा बने । त्यसबखत मगधका राजधानी पाटलीपुत्र थियो । पाटलीपुत्र बौद्धधर्मका गढ मानिन्थियो । पुष्पमित्र शुंग राजा भएपछि मगधदेशका राजधानी पाटलीपुत्रबाट हटाएर ।।।साकेत’मा राजधानी कायम गरें । साकेत पहिला शाक्यहरुको सबल स्थान थियो । शाक्यकै नामले स्थानको नाम साकेत राखिएको थियो । पुष्य मित्र शुंग महाधूर्त र अत्यन्त चतुर–चलाक शासक थिए । उनले साकेतको नाम समेत परिर्वतन गरें । वर्तमानमा भारतक उत्तरप्रदेश राज्यमा पर्ने रामजन्मभूमि अध्योध्या बुद्धकालमा साकेत नगर थियो । पुष्यमित्र साकेतलाई परिवर्तन गरी ।।।अयोध्या’ नामाकरण गराए । क्रमश : तात्कालिन शासनशैली पनि बाधकबुद्धमहानिर्वाणको प्रथम शताब्दिपछि बज्जीपुत्तका भिक्षु एवं तात्कालिक बैशालीका नागरिकहरु बौद्धधर्म विपरित क्रियाकलाप गर्न थाले । भिक्षुनी संघ व्यभिचारीहरुको अड्डा बनिसके । संघमा नारीको प्रवेशको सहमति दिदा बुद्ध स्वयं पछि पश्चातापगरें । बौद्धधर्म प्रसारका सार्वाधिक प्रभाव कालमा बौद्धभिक्षु नागरिकसंग मीलेर विपरित आचरण गर्न थाले त्यसले बौद्धधर्मलाई बदनाम गराउने षडयन्त्र सफल भयो । मिथिला बज्जी संघको सदस्य भएपछि बौद्धधर्मको प्रभावमा मिथिला पर्न सक्छ । यस भयले आजात शत्रुका पुत्र उदयन शैव, शाक्त तथा बैष्णवधर्ममा विभक्त तात्कालिक मैथिली समाजलाई सम्माहित गराउन स्मार्त सम्प्रदायको निर्माण र विकास गरें । स्मार्त सम्प्रदाय भन्नाले ।।।एक्कैसंग शिव, शक्ति र बिष्णुको उपासना गर्ने र पुजने परम्परा हो ।’ यसै स्मार्त पन्थको प्रतिक आजपनि परम्परावादी मैथिल निधारमा शैवधर्मको प्रतिक विभूत÷भष्म लगाउंछन् । शाक्त धर्मका आस्थाको प्रतिक रक्तचन्न वा कलेजो रङ्गक रोड़ी–पीपा–सिन्दुरको तिलक गर्छन् । बैष्णवधर्मको आस्थाका प्रतिक रामरस,पीयौड़ी (माटोले बनाइएको एकप्रकारको चन्दन) लगाउं छन् । मौर्य सम्राट बिम्बसार बिस्तारवादी थिए । बिम्बसारका पुत्र अजात शत्रु पनि विस्तारवादी एवं महत्वाकांक्षी थिए । बज्जिसंघलाई धरासायी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने षडयन्त्र अजात शत्रुले रचि सकेका थिए । मगधसम्राट अजात शत्रु अधिन मिथिला आएपछि । राज्यशासन विस्तारमा ब्राह्मणीय आडम्बरी संस्कृतिलाई पुनःजागृति हुने अवसर भेटायो । बैशाली नागरिक लिच्छविहरुको पूmट डालेर आप््mनो कुशलाता देखाउन थाले । अनुकूल वातारण तयार भएपछि अजात शत्रु बैशालीमाथि आक्रमण थाले । सोरह वर्षसम्म संघर्ष चलेको चल्दै रह्यो । ईशापूर्व ५६२–५४५सम्म चलेको संघर्षमा अन्ततः बज्जिसंघ पराजित भयो । बज्जिसंघको पतनपछि अनेक तरहले राजनीतिक उथल–पुथल भएको ईतिहास छ । मिथिला बैशाली गणराज्यबाट कटेर मगध साम्राज्यका अङ्ग बन्न गएको थियो । राजनीतिका त्यहीं कहालीलाग्दो समयको कालखण्डमा गौतमबुद्ध पृथवीमा पाइला टेकेका थिए । बुद्धको समयमा बैशाली (वर्तमान भारत बिहार राज्यका राजधानी पटना नजिक कायम बैशाली जिल्ला) एउटा घना बस्ती थियो । त्यस अन्तर्गत तीनवटा मण्डला थिए । पहिलो मण्डला अन्तर्गत ७ हजार, दोस्रो अन्तर्गत १४ हजार तथा तेस्रो मण्डला अन्तर्गत २१ हजार घर–वास थिए । बुद्धकालका प्रचलित गणराज्य वर्तमान भारतको गोरखपुर, दरभंगा, मधुबनी र गङ्गानदीको मध्यवर्तीयक्षेत्र(हालको मिथिला–क्षेत्र)एवं नेपालको हिमालीक्षेत्रसम्म फैलिएको बिभिन्न गणराज्य कायम थियो । विभिन्न गणराज्यहरुमा मगध, कोलिय, शाक्य, लिच्छवि, विदेह आदि प्रसिद्ध गणराज्य थिए । त्यती बेला मिथिला भन्ने थिएन । विदेह थियो विदेहलाई नै कलान्तरमा आएर मिथिला भन्न थालिएको हो । गौतम बुद्धलाई महामानव बनाउने अथवा देउता बनाउने जो साँस्कृतिक विरासत छ हामिलाई प्राप्तछ त्यो हाम्रो मुलुकको गौरवपूर्ण सम्पत्ति हो । यस अतुलनीय सम्पत्तिमाथि मिथिला–मधेसलेपनि गर्व गर्नुपर्छ ।वैदिककालको प्रचलित धर्म र धार्मिक विश्वासमाथि बुद्धले ठूलो घात गरेकोछ । यो कुरो ब्राह्मणहरुले प्रचारित गर्ने कार्यमा तल्लिन भए । उनिहरुको बुझाई थियो बुद्धधर्मको प्रसारले आप्mनो रोजी–रोटीको साधन बन्द भएको छ । समान्य जनता अधिकांश बुद्धका अनुयायी थिए । बज्जि महासंघमा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुँदा महामानव गौतम बुद्धसंग परामर्श गरिन्थियो त्यो कुरोपनि स्वीकार्य भइरहेका थिएन । अनि भित्रै भित्र षडयन्त्रको जालो बुन्ने काम भइसकेको थियो । आपूmलाई अपमानित अनुभूति गरिरहेका ब्राह्मणहरु र अन्य बीच तारतम्य मीलि रहेका थिएन । सोही अवधिबीच बज्जि महासंघमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो तथा अजात शत्रुले आक्रमण थाले । बस ! ब्राह्मणहरुको सुन्दर दिन फर्कियो । बौद्ध र सनातन धर्मबीचको भिन्नताबौद्धधर्मको मूलसार भनेको बौद्ध निर्वाण सिखाउंद छन् । सनातन (हिन्दु) धर्म मोक्ष प्राप्तिको सहज मार्ग बताउं छन् । भनाइको तातपर्य हो बौद्धधर्म अनिश्वरवादी धर्म छ । यसले मानवको मानवीय पक्षलाई माथि उठाउने पक्षमा विश्वास राख्छन् । ईश्वरको कमिको अनुभूति हुन दिदैन् । सनातनधर्म अन्तर्गत हिन्दुधर्म यसको विपरित दिशा तर्फ लग्छन् ! ईश्वरको आवश्यकता हरेकजीवलाई हुन्छ यो बोध गराउंदै ईश्वरीय शक्तिको प्राप्ती बिना सही रुपमा मोक्ष प्राप्ती हुन सक्दैन भनि बोध गराउंछन् र मानवलाई जीवनभरि त्यसैमा अल्झाएर रहन बाध्य बनाई दिन्छन् जो मानवको अनेक दुःखका कारण बनैत जान्छ । बुद्धधर्ममा यस्तो ।।।ओझराहट’ अल्झाई बझाई गरी राख्ने नीति सिद्धान्त छैन् । बुभ्mनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा यो पनि एक हो ।निर्वाण तथा मोक्ष दुबै दुई विषय हुन् । निर्वाण परिर्वतनका सूचक हो भने मोक्ष अन्त ! परिवर्तन देशकाल समय परिस्थितिलाई बुभ्mदै, आभाष गर्दै जीवनपथमा चल्नकालागि प्रेरित गर्छन् । मोक्ष यथास्थितिमा रहेर संसारिक सबैथोक त्यागेर जानलाई मनोवैज्ञानिकरुपमा तयार गर्छन् । बुद्धका नीति सिद्धान्त(धर्म) र अन्यधर्ममा भिन्नता भनेको यही हो । बुद्धलले भनेका हुन–।।। म न प्रथम छु न अन्तिम, मभन्दा अघिपनि धेरै बुद्ध भए र मेरो पछाडि पनि धेरै बुद्ध हुने छन् । ’ बुद्धका यी महावाणि भन्नुको पछाडिका कारण हो हरेक स्वयंलाई पहिला जान,पहिचान र मान ! यसो गरेपछि बुद्ध कतै खोज्नु पर्दैन । तीमि स्वयं नै बुद्ध छौं, हुन्छौं । सन्देश दिएका हुन ! मानवले आफै आफूलाई जानेपछि । जीवनको बाटोमा हिन्दै जांदा मानिस कतै अल्झिदैन् । हिड्न खोजेका हरेक असहज बाटो सहज भएरजान्छ । मोक्ष पनि सहजतापूर्वक प्राप्त हुन्छ । मोक्ष प्राप्तिका लागि सीताराम–सीताराम, राधे–कृष्ण राधेकृष्णको नाम जाप गर्नु पर्दैन । हरेशिव–हरेशिव रट्नु पनि पर्दैन । बुद्धको मार्गमा हिड्नेहरुलाई ।।। मप्रति आदर भाव मन छ, त्यसकारण मलाई मान त्यो कुरो नहोस् । मैले हिडेको बाटोमा तिमीपनि हिडेर जाउँ र अनुभव गर । अनुभवको कसौटीमा मेरो कथो उपकथर्न शिद्ध हुन्छ त्यसपछि मान्ने मन भए मात्र मान ’ ! बुद्ध आप्mना अनुयायीहरुलाइ सन्देश दिदैं भनेका हुन् । त्यहीं हिन्दुधर्मको प्रसिद्ध ग्रन्थ गीतामा ।।।सबै थोक गर्ने ईश्वर हुन् । मानव मात्र निमित्त छ अरु केही होइन ’ भनेका छन् ! यस्तो विपरितार्थ कुरा किन छ ? त्यसको मूलकारण हो । गीता दास बनाउने साधन हो । बुद्ध वचन कर्म गर्दै जाउ अनुभव हुन्छ र अनुभव भए मुक्तिको सही मार्ग देखिन्छ, उत्तम बाटो भेटाउंछ । ।।।।।।अप्पो दीपो भवः’’ अर्थात् ।।।आप्mनो प्रकाश आफै बन्नु’ । मानव त्यतीको सामथ्र्यवान प्राणि हुन जो आपूm मात्रे प्रकाशित हुंदैन आप्mनो प्रकाश–ज्ञानले संसारलाई आलोकित गर्न सक्छ । यस्ता मानवतावादी सिद्धान्त प्रवाहक बुद्धका नीति सिद्धान्तसंग मिथिला–मधेसका मानिस किन ।।।अछोप’(बञ्चित) रहन गएको हो । अथवा राखि दिएको हो । त्यसलाई खोत्लन जरुरी छ । मिथिला–मधेसको इतिहासमा जे जति नै लेखिएका छन् त्यसमा बुद्धलाई मानक बनाउनु पर्थियो । तर त्यसको चर्चा खासै गरेको पाइदैन यस्तो बइमानी गरिएको हो । अब त्योपनि सुधार्न तिर जानुपर्छ । हुन त’ मैथिली साहित्यको चर्चा गर्दै डा.बाससुदेवलाल दास ।।।मिथिलाको समाज र संस्कृति’ नामक पुस्तकमा ।।। विद्यापतिकालको साहित्य अन्तर्गत प्राकृत–व्यवस्था आहोर प्राकृत–पैंगलम् उल्लेखनीय रहेको भनि समान्य चर्चा गर्नु भएको हो । जो बुद्धसंग सम्बद्ध छन् । बौद्धधर्मलाई बिस्थापित गर्ने षडयन्त्रका कारक तत्व प्रतापि मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त आप्mनो मन्त्री कौटिल्य(चाणक्य)संग दुःखित भएर जैनधर्ममा दिक्षित भएका थिए । चन्द्रगुप्तका नाति अशोक सम्राट ।।।अश्वमेध यज्ञ’ आयोजन नगरीकन आप्mनो साम्राराज्य बिस्तार सम्पूर्ण भारतमा गरेका थिए । जो कुरा ब्राह्मणहूलाई अपच्चय भयो । र सम्राट अशोकलाई उनिहरुले चण्डालको उपाधि दिएर प्रचारित समेत गर्न थाले । सो समयमा कुनै कार्य विस्तार गर्दा सामथ्र्यवानहरुलाई यज्ञ गर्नुपर्ने अनिवार्यता ब्राह्मणहरुले गरेका थिए । सम्राट अशोकले त्यो अनिवार्यतालाई चुनौती दिदै भंग गरेकाले अशोकलाई बदनाम गर्न ब्राह्मणी पडयन्त्र भएको थियो । सम्राट अशोक बुद्धका नीति र सिद्धान्तसंग परिचित हुन थालेका थिए । त्यसैले आडम्बरी ब्राह्मणी धर्म–पंथलाई आवश्यक ठानेन । कालिंग युद्धमा विजयी प्राप्ती पछि सम्राट अशोक बौद्धधर्म ग्रहण गरें । अशोकका पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रासंग भिक्षु बनेर श्रीलंकामा बौद्धधर्मको प्रचार गरें । यस प्रकारले सम्राट अशोक मात्र राज्य विस्तार नगरेर बौद्धधर्मका धर्मसेतु तराई–मधेस मिथिलादेखि हिमालयसम्म विस्तार गरेका थिए । चन्द्रगुप्त पछि विन्दुसार राजा भएका थिए । विन्दुसारका पुत्र अशोक विश्व इतिहासमा अत्यन्त प्रतापि सम्राटको रुपमा आप्mनो पहिचान स्थापित गर्न सफल भए । अशोक तेजस्वी सम्राटका रुपमा आप्mनो पहिचान स्थापित गरेंका थिए । कालिंग युद्धमा विजयी प्राप्त गरेपछि सम्राट अशोक पुरै उत्तरी भारतलाई मगध साम्राज्य अन्तर्गत सामेल गराए । सो अन्र्तगत नेपालका तराई–मधेशपनि सम्माहित भएका थिए । त्यसकालमा वर्ण व्यवस्थालेपनि थेरै प्रश्रय पायो र काम पनि गर्यो । मूलवासी र आयातित आर्यहरुबीचको पनि निकैद्वन्द थियो । बर्ण व्यवस्थामा ब्राह्मण राजा हुंदैन थिए । तर त्यस व्यवस्थालाई भंग गर्ने काम युक्तिपूर्वक भयो । पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण आपनी बहिनलाई प्रयोग गरेर मौर्य सम्राज्यमा घुसपैठ गरें । मौर्यसम्राज्यका सेना रहंदा सेनापति पदमा बहाल हुनमा सफल्ता पाए । पुष्यमित्र शुंग सेनापति भएपछि उनले सेनाको अन्य महत्वपूर्ण पदहरुमा आप्mना विश्वास पात्रहरुलाई नियुक्त गरें । षडयन्त्रका सबै जालो बुनेर तयार भइसकेपछि अल्पव्यस्क सम्राट बृहद्रथलाई हत्या गरियो तथा पुष्यमित्र स्वयं राजा बने । त्यसबखत मगधका राजधानी पाटलीपुत्र थियो । पाटलीपुत्र बौद्धधर्मका गढ मानिन्थियो । पुष्पमित्र शुंग राजा भएपछि मगधदेशका राजधानी पाटलीपुत्रबाट हटाएर ।।।साकेत’मा राजधानी कायम गरें । साकेत पहिला शाक्यहरुको सबल स्थान थियो । शाक्यकै नामले स्थानको नाम साकेत राखिएको थियो । पुष्य मित्र शुंग महाधूर्त र अत्यन्त चतुर–चलाक शासक थिए । उनले साकेतको नाम समेत परिर्वतन गरें । वर्तमानमा भारतक उत्तरप्रदेश राज्यमा पर्ने रामजन्मभूमि अध्योध्या बुद्धकालमा साकेत नगर थियो । पुष्यमित्र साकेतलाई परिवर्तन गरी ।।।अयोध्या’ नामाकरण गराए ।